Fetin’ny Paska : manomboka ny herinandro masina | NewsMada
Fetin’ny Paska : manomboka ny herinandro masina
Nanomboka ny alahady teo ny herinandro masina ho an’ny kristianina. Misy hatrany ny fanompoam-pivavahana isaky ny hariva ho fitsenana ny fetin’ny Paska. Miezaka manamboatra ny fandaharam-potoany avokoa ny mpiasa mirava hariva rehetra. Hatry ny omaly, nifanotofana ny taxi-be fa maika hamonjy herinandro masina ny mpiasa avy mirava any am-piasana.
Hiavaka kosa ny fanamarihana ny alakamisy masina izay iarahan’ny kristianina miombon-databatra amin’ny Tompo. Maharitra ora maro ny fotoam-pivavahana amin’io ka mila miomana amin’izany ny rehetra.
Tsy tokony hohadinoina anefa fa misy ihany koa ireo mpanararaotra manao ny asa ratsiny rehefa mandeha any am-piangonana ny tompon-trano. Mila mailo araka izany ny kristianina manoloana izany fanararaotana izany. Na any am-piangonana aza, misy ny asa ratsy ataon’ny mpangalatra ka tokony ho mailo.
Fanomanam-panahy hiatrehana ny fetin’ny Paska, nitsangan’i Kristy tamin’ny maty ny herinandro masina. Mitaky toe-po sy toe-tsaina ary fitondran-tena mendrika, araka izany, ny fetin’ny Paska izay efa hatomboka amin’izao herinandro masina izao.